होमपेज / कला / बलीवुड / दीपिकाको नेपाल सम्झना
दीपिकाको नेपाल सम्झना	05 Aug 2013 | 08:58am सोमबार २१ श्रावण, २०७०
दुबई– बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले सानै उमेरमा नेपाल गएको प्रसंग मिडियाकर्मीलाई बताएकी छन्। रिलिजको तयारीमा रहेको फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस'को प्रचार गर्न गत बिहीबार शाहरुख खानसँग दुबई पुगेकी दीपिकाले नेपालमा भएको ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा आफूले भाग लिएको अवगत गराइन्। सत्तरीको दशकका नम्बर एक भारतीय ब्याडमिन्टन खेलाडी प्रकाश पादुकोणकी जेठी छोरी हुन् दीपिका। उनी हाइस्कुलमा पढ्दासम्म राज्यस्तरीय ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा भाग लिन्थिन्। त्यही समयतिर उनी नेपाल आएकी हुनसक्छ। दुबईमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा शाहरुख र दीपिका दुवैले रेलको यात्रा कति रोमाञ्चक र रमाइलो हुन्छ भन्ने व्याख्या गर्दैथिए। फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस'मा रेलयात्राको लामो प्रसंग छ। त्यसैले पत्रकार सम्मेलनमा रेलयात्राको कुरा उठेको थियो। शाहरुखले ताजमहल हेर्नका लागि आगरासम्म गरिएको रेलयात्रालाई अविस्मरणीय बताए। दीपिकाले चाहिँ नेपालमा ब्याडमिन्टन खेल्न जाँदा गरिएको रेलयात्रा सबैभन्दा प्रिय भएको सुनाइन्।बैंगलोरमा हुर्किएकी दीपिकाको जन्म डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको थियो। त्यतिबेला उनका बुबा प्रकाश ब्याडमिन्टन प्रशिक्षण लिनका लागि डेनमार्कमा थिए। अहिले २७ पुगेकी दीपिकाले २० वर्षको उमेरदेखि नै कन्नड फिल्म 'ऐश्वर्या'बाट अभिनय थालेकी हुन्। रोहित शेट्टीद्वारा निर्देशित 'चेन्नई एक्सप्रेस' दीपिकाको २० औं फिल्म हो। « कट्रिनाले सलमानको उपहार कार के गर्लिन्?
गोवामा के गर्दैछिन् सन्नी लियोन? »